Ogaden News Agency (ONA) – Daawo: Muuqaal Muujinaya Diyaar Garowga Qawmiyada Axmaarada.
Daawo: Muuqaal Muujinaya Diyaar Garowga Qawmiyada Axmaarada.
Posted by Dulmane	/ August 23, 2016
Qoomiyada Axmaaradu waxay kamid tahay qoomiyadaha sida wayn uga soo horjeeda kooxda TPLF ee qowlaysatada ah waxayna qoomayada Axmaaradu bilowday kacdoon ayna ukala hadhin oo shacab iyo siyaasiba ay kasiman yihiin.
Sida aad kadaawan doontaan muuqaalkan hoose qoomiyada xabashida ayaa umidaysan sidii ay isaga tuuri lahaayeen kooxda yar ee Tigree waxayna qoomiyadu bilowday dagaal laba geesood ah oo dhinacna ay adeegsanayaan hubka wax gumaada dhinaca kalana ay doonayaan in ay banaanbax xaqooda kuraad sadaan.
Dadka suugaan yahanka ah ee qoomiyada Axmaarada udhashay ayaa bilaabay in ay gabayo iyo heeso tiriyaan iyagoo kicinaya shacabkooda isla markaana suugaan kucabiraya dhibkii loogaystay qoomiyadooda, Sidoo kale suugaan yahanada ayaa cabiraya dhaqan xumada kooxda TPLF iyo sida loogu baahan yahay in horay loo tikhaan tikhiyo.
Hoos kadaawo sida ay qoomiyada Axmaaradu isu abaabulayso iyo sida ay isugu duuban yihiin.